Zvishoma nezvishoma mumatope mabheyaringi kazhinji kuzvidzora lubricating basa hukawanika
by pamusoro 18-05-11
Pari kushandiswa mabheyaringi kazhinji chinogona kukamurwa rinopfungaira mabheyaringi uye bani mabheyaringi; tikaisa mabheyaringi uye bani mabheyaringi kushanda nhungamiro zvinogona kupatsanurwa nezita rokuti, ari rinopfungaira kubereka rinopfungaira mashandiro makakatanwa ari tumbling kurwisana, asi nokushanda slid ...
Oiri-voitakura ane hunhu mukuru kutakura okuita, kwechirwere nemishonga, mukuru tembiricha kuzvidzivirira uye simba kuzvidzora lubricating kugona. Hazvina kunyanya yakakodzera zviitiko kuti zvakaoma tsvedzesa uye kuumba mafuta firimu akadai mutoro, pasi kumhanya, reciprocating kana swi ...
Zvishoma nezvishoma mumatope mabheyaringi vanofanira kuteerera nyaya
Zvishoma nezvishoma mumatope mabheyaringi vari pamusoro kuonana, saka kuonana pamusoro kuramba mumwe firimu, saka akagadzira vanofanira kuteerera mibvunzo inotevera: 1, kuti mafuta firimu anogona zvakanaka kupinda kukweshera pamusoro. 2, mafuta vanofanira kuva asiri kubereka pemvura nzvimbo kupinda kubereka. 3, regai kuita add ...
BAUMA M & T Expo JUNE 5-8,2018 MIRAI (Booth) NO. IS: 1650-5